‘वडामा असिमित योजना छन्, बजेट छैन्’
सोमबार, वैशाख ६, २०७८ ०२:२०:५३
‘वडामा असिमित योजना छन्, बजेट छैन्’ सडक स्तरोन्नति, प्राविधिक शिक्षा र १ घर १ धारा अवका मुख्य तीन प्राथमिकता
रुकुम पश्चिम, पुष २५, २०७७ । कखरा संवाददाता
मुसीकोट नगरपालिकाका साविकका वडा नं. ३ र ४ मिलेर बनेको छ, हालको मुसीकोट वडा नं. ५ । यो वडा सबै विकास निर्माणका हिसावले सुगममा पर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, विद्युत लगायतको सुविधा अन्य वडाको तुलनामा यो वडामा बढी छ । जिल्ला सदरमुकाम समेत रहेको मुसीकोट नगरपालिकाका सबैभन्दा विकसित वडा मध्यमा वडा नं. १ संगै यो वडा पनि पर्छ । चार सय ४७ घरधुरी रहेको यस वडाको कुल जनसंख्या दुई हजार चार सय ९४ छ । यस वडामा विभिन्न सरकारी तथा अन्य विभिन्न संघ संस्थाका कार्यालयहरु समेत छन् । राप्ती लोक मार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गले यो वडालाई छोएको छ । कर्णाली प्रदेशको मुख्य धार्मिक स्थल डिग्र शाईकुमारी मन्दिर पनि यसै वडामा पर्छ ।
यसै वडाको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ, ३४ वर्षीय युवा शुशिल गौतम । सानै देखि संगठित गौतम तत्कालिन माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बन्दै वडाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । तीन कक्षामा पढ्दै गर्दा उहाँ संगठिन हुन थाल्नुभयो । बाल संगठनको अध्यक्षबाट संगठित हुनुभएका उहाँ पार्टीमा आवद्ध हुँदै अहिले जिल्ला सचिवालय सदस्यसम्म पुग्नुभएको छ । २०५४ सालमा तत्कालिन नेकपा माओवादीको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीको इकाई समिटि सदस्य बन्नुभएका गौतम २०५७ मो विद्यार्थीको यरीया कमिटि सह–सचिव बन्नुभयो । २०५८ मै उहाँले पार्टी सदस्यता लिनुभयो र उहाँलाई पार्टीले सेल सेक्रेटरीको जिम्मेवारी दियो । २०६३ मा विद्यार्थीका जिल्ला सदस्य, २०६४ मा पार्टीको यरीया कमिटि सदस्य, २०६५ मा मुसीकोट खलंगा बहुमुखि क्याम्पसका स्ववियू उप–सभापति, २०६६ मा पार्टी जिल्ला सदस्य, २०६९ मा विद्यार्थीको जिल्ला अध्यक्ष, २०७२ मा विद्यार्थीको केन्द्रीय सदस्य बन्नुभएका गौतम २०७२ मै पार्टीको नगर कमिटि सह–सचिव बन्नुभयो । पछि २०७४ साल वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उहाँ तीन सय ५२ मत ल्याएर वडाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो ।
१२ करोड बजेट खर्च
वडाले नगर, प्रदेश र संघबाट आएको गरी अहिलेसम्म करिब १२ करोड बजेट खर्च गरेको छ । वडाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिंचाई, कृषि, खानेपानी, गोरेटो बाटो, रोजगारी, भवन निर्माण, उद्योग गरी विभिन्न शिर्षकमा यो बजेट खर्च गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को केही र त्यसपछिको हालसम्म बजेट वडामा खर्च भएको छ ।
पहिलो प्राथमिकतामा शिक्षा
वडाले वडाको पहिलो प्राथमिकतामा शिक्षालाई राखेको छ । वडामा २ वटा विद्यालय छन् । यमुना नन्द नमूना मावि शेरिगाउँ र शाईकुमारी आधारभुत विद्यालय थर्पू । वडाले हालसम्म शिक्षामा १ करोड १० लाख बजेट खर्चिएको छ । यमूना नन्द नमुना माविको ६ कोठे भवन बनेको छ । दिवा खाजा कार्यक्रम संचालनमा छ । ई–हाजिरी, सिसि क्यामेरा, विज्ञान सामग्री, १ जना करार शिक्षकको व्यवस्था, विज्ञान सामग्री, पुस्तकालय व्यवस्थापन र शौचालय निर्माण पनि भएको छ । यि सबै विद्यालय नमूना कार्यक्रम अन्तरगत भएका हुन् । शाईकुमारी आधारभुत विद्यालयमा ३ कोठे भवन निर्माण, फिल्ड निर्माण, घेराबार, विद्यार्थीलाई टिफिन बक्स वितरण, १ जना करार शिक्षक नियुक्त र गेट निर्माण भएको छ । आधारभुत विद्यालय डाङडुङ्गे भने विद्यार्थी नभएका कारण बन्द गरिएको छ । त्यहाँ शिक्षक अन्यत्र समायोजन गरिएको छ ।
एक घर एक धाराको लक्ष
वडाले एक घर एक धाराको लक्ष लिएको छ । वडाका सबै टोलमा खानेपानीको सहज पहुँच छ । तर व्यवस्थापनमा समस्या छ । वडाले त्यसको व्यवस्थापन गरी एक घर एक धारा पुर्याउने लक्ष लिएको छ । वडाले अहिलेसम्म ८ वटा खानेपानी आयोजना निर्माण र मर्मत गरेको छ । नयाँ वस्ती खानेपानी मर्मत, सिलिङ्गि पधेँरा खानेपानी मर्मत, घुईलपानी खानेपानी मर्मत, थर्पू–बाघखोर खानेपानी आयोजना निर्माण, देउताखोला–जोगिढुंगा खानेपानी आयोजना निर्माण, देउताखोला–तल्लो थर्पू खानेपानी आयोजना मर्मत, पातलखोला–थर्पू खानेपानी आयोजना निर्माण र देउताखोला–थर्पू खानेपानी आयोजना गरी ८ वटा खानेपानी आयोजना निर्माण र मर्मत भएका छन् । खानेपानी आयोजनामा मात्र वडाले साढे तीन वर्षमा १८ लाख बजेट खर्च गरेको छ ।
साढे ५ किलोमिट सडकको ट्रयाक ओपन
वडाले सडक नपुगेका टोलमा सडक लैजाने कामलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । अव वडाका लगभग सबै टोलमा सडक पुगिसकेको छ । तल्लो थर्पू टोलवाहेक सबै टोल सडक सञ्जालमा जोडिएका छन्, उक्त टोलबाट पनि सडकमा पुग्न ५ मिनेटभन्दा बढी लाग्दैन् । वडाले जनप्रतिनिधि पाएपछि हालसम्म साढे ७ किलोमिटर सडकको ट्रयाक ओपन गरिएको छ । साढे ३ किलोमिटर सडक मर्मत भएको छ । ४० मिटर बाटो पि.सि.सि ढलान गरिएको छ । त्रिवेणि चोक–रावलवारा–घोयलपानी–काम्ले ३ किलोमिटर सडक १० लाखमा निर्माण भएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग–कोलटाकुरा–छेरा सडक ४ किलोमिटर मध्य १ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक ओपन गरिदा ३ किलोमिटर मर्मत गरिएको छ । डिग्रे–जोगिढुंगा–देउताखोला ११ सय मिटर ट्रयाक ओपन, डिग्रे–बाघखोर ३ सय मिटर सडक ट्रयाक ओपन, महिला भवन–स्वास्थ्य भवन ३ सय २५ मिटर ट्रयाक ओपन र ढिकिच्याई–रिठेगौरा–कोलटाकुरा ४ सय मिटर सडक मर्मत भएको छ । डाराखेत–भण्डारीकाँडा सडक अन्तरगत ४० मिटर बाटो पि.सि.सि ढलान गरिएको छ । सडकमा वडाले ६७ लाख ५० हजार खर्च गरेको छ ।
कृषिमा साढे ६६ लाख खर्च
वडाले कृषिमा साढे ६६ लाख खर्च गरेको छ । हालसम्म कृषिका विभिन्न योजनामा ६६ लाख ६० हजार २ सय खर्च भएको हो । कृषकहरुले टनेल, च्याउमा अनुदान, ताजा तरकारी अनुदान, भैंसिपालन, बाख्रा पालन, भकारो सुधार, कुखुरा पालन, मसला बाली पकेट, वीउ, विरुवा, युवा लक्षित कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रमबाट कृषि प्रोत्साहन, दलित एकल महिला कृषि करार खेतिमा सहयोग पाएका छन् । यि कार्यक्रम कृषिमा व्यवशायिकरणका लागि भएको वडाध्यक्ष गौतमले बताउनुभयो ।
सिंचाईका ८ योजना
वडाले सिंचाईमा आधा करोड बजेट खर्च गरेको छ । अहिलेसम्म ८ वटा सिंचाईका योजना सम्पन्न भएका छन् । यसमा ४९ लाख १० हजार बजेट खर्च भएको छ । १ सय ८० मिटरको सिलिङ्गि–पधेँरा–गाउँमनि सिंचाई नहर, २ हजार २ सय मिटरको धारापानी–कोलटाकुरा सिंचाई, १ सय ५० मिटरको साउनेपानी–ब्रह्माथान सिंचाई, २ सय ९० मिटरको सेराखेत सिंचाई, २ सय मिटरको कालिका मन्दिर–कुनावाङ सिंचाई, १ सय मिटरको चनावारी–घुयलपानी सिंचाई र ३ सय मिटरको ठेउलेनि सिंचाई नहर निर्माण भएको छ । त्यस्तै ३ सय मिटर लामो चनावारी–घुयलपानी पाईप सिंचाई योजनाको काम पनि सकिएको छ । वडाका सबैतिर सिंचाईको सुविधा छ ।
गोरेटै गोरेटो बाटा
१ दर्जन गोरोटो बाटो निर्माण तथा मर्मत गरिएको छ । ९ वटा पि.सि.सि ढलानवाला गारेटो माटो निर्माण गरिएको छ भने २ वटा कच्चि गोरोटो बाटो वडाले बनाएको छ । कोलटाकुरा–ढिकिच्याई, कुरीपानी–सिलिङ्गि पधेँरा–सेरिगाउँ, लाटाखोला–मध्यपहाडी लोकमार्ग–साउनेपानी, ठुलीपिपल–राप्ती लोकमार्ग–गैरीगाउँ–पुतलिबोट, पानाखोला–सेरीगाउँ–डाँडाखेत, वन कार्यालय–भान्छेवारी, विजय होटल–सेरीगाउँ, कालिका मन्दिर–घुयलपानी र गारापानी–तल्लो डाङडुङ्गे जोड्ने गोरेटो बाटो पि.सि.सि ढलान गरेर पक्कि बनाईएको छ । यसरी ४ हजार ५ सय ९१ मिटर अर्थात साढे ४ किलोमिटर गोरेटो बाटो पक्कि बनेको छ । ५ सय मिटर लम्बाई रहेको कुनावाङ–ज्यामिनडाँडा जोड्ने र ४ किलोमिटर लम्बाई रहेको पानाखोला–कालिका मन्दिर–तल्लो थर्पू जोड्ने कच्चि गोरेटो बाटो समेत निर्माण भएको छ । पक्कि र कच्चि गोरेटो बाटोमा ५३ लाख बजेट लागेको छ ।
पूर्वाधार निर्माणका योजना पनि
२ वटा सामुदायिक भवन बनेका छन् । १४ लाखमा एउटा र १५ लाखमा अर्को भवन बनेको छ भने एउटा भवन २ लाखमा मर्मत गरिएको छ । डिग्रे मन्दिरमा विभिन्न पूर्वाधार निर्माणमा ६९ लाख खर्च भएको छ । प्याराफिट निर्माण, सिँढि निर्माण, धर्मशाला निर्माण र गेट निर्माणमा संघ र प्रदेशबाट आयएको यो बजेट वडाले खर्चिएको छ । जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत ४ वटा घर निर्माण भएका छन् । वडाले बचेको प्रशासनिक खर्च ५० हजारबाट एक घरलाई जस्तापाता सहयोग गरेको छ । डाङडुङ्गे र ठाराढुंगालाई जोड्न ६४ लाखमा ट्रस्ट पुल निर्माण गरिएको छ भने ७१ लाख खर्चमा पानाखोलामा अर्को ट्रस्ट पुल बनेको छ । थर्पूमा ३३ लाखमा स्वास्थ्य भवन पनि निर्माण भएको छ ।
वडाले हालसम्म १७ जना ८० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई फाईबरको सिरक वितरण गरेको छ । जेष्ठ नागरिकलाई नै टर्च र छाता पनि बाँडिएको छ । यो पाउँनेमा ८० जना छन् । सुनौला हजार दिन भित्रका ५० आमालाई पोषिलो झोला पनि वडाले दिएको छ । उद्योग अन्तरगत झोला, बर्कि, ढाँका बुनाई उद्योगका लागि ६ लाख ३२ हजार, सिलाई कटाईका लागि ५ लाख, वेमौसमि तरकारी वीउ उत्पादनका लागि ९ लाख ५० हजार, मुडा निर्माणका लागि १७ जनालाई २ लाख, ३० घरलाई निशुल्क मिटर बक्स वितरण पनि भएको छ । ३० जनालाई सिपमुलक तालिम प्रदान गर्नुका साथै ५ वटा मौरी घार ५० प्रतिशतमा र ३ वटा घार ८० प्रतिशत अनुदानमा वितरण भएको वडाध्यक्ष गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
मुख्य प्राथमिकतामा तीन विषय
वडाले अव ३ कुरालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । ति हुन् सडक स्तरोन्नति, प्राविधिक शिक्षा र खानेपानीका १ घर १ धारा । वडाका सबै ठाउँमा १२ महिना चल्ने सडक भएपनि अव तिनको स्तरोन्नति गरी पिचसम्म गर्ने योजना वडाको छ । वडाका सबै घरधुरीमा धारा पुर्याउने लक्ष पनि अव वडाको प्राथमिकतामा छ । त्यसैगरी वडामा बढी भन्दा बढी प्राविधिक धारको पढाईलाई भित्र्याउने लक्ष छ । अहिलेसम्म वडामा प्राविधिक धारको पढाई सुरु हुन सकेको छैन् ।
बजेट अभाव प्रमुख चुनौती
कर्मचारी र अन्य व्यवस्थापकिय चुनौति खासै भोग्न नपरेको यो वडाले आर्थिक समस्या भने भोग्नु परेको छ । वडामा असिमित योजनाहरु रहेको तर बजेट सिमित छ । ‘बाहिरबाट हेर्दा सबै पुगेको जस्तो देखिन्छ, तर भित्र हेर्दा खाली, खाली जस्तो पनि छ, सिमित बजेटका कारण धेरै गर्न सकिएको छैन्, वडाध्यक्ष गौतमले भन्नुभयो ।’ निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला जे सोचिएको थियो त्यो सबै पुरा गर्न नसकिएको उहाँ स्विकार्नु हुन्छ । चुनावका बेला जनतामा बाँडेका सपना अनुसार नै काम गरिरहेको तर आफुले सोचेका भने सबै कुरा पुरा हुन बाँकी रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘बाहिर भनेका जति त पूरा हुने क्रममा छन, ति पुरा हुन्छन नै, उहाँले भन्नुभयो, तर आफुले जे भित्र सोचेर आएको थिए, त्यसरी भने काम गर्न नसकेको जस्तो लाग्छ, तर चिन्तित भने छैन् ।’ यो काम गर्छु भनेर सोच्यो तर कतैबाट बजेट आउने अवस्था नभएपछि त्यत्तिकै पछि हट्नुपर्ने यथार्थ उहाँ र उहाँको टिमले भोगिरहेको छ । जनताबाट पनि धेरै योजनाहरु आइरहेकामा ति सबै योजना पनि बजेट नभएका कारण कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नभएको उहाँले स्पस्ट पार्नुभयो । अहिलेको भन्दा बढी बजेट आउने हो भने देखिने गरी ठूला ठूला काम गर्न सकिने र यसबाट जनताले पनि स्थानीय तह भएको राम्ररी महशुस गर्न पाउने भनाई उहाँको छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस २५, २०७७, ०५:४७:००